CoSchedule: Editorial na Social Publishing Kalinda maka WordPress | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 15, 2014 Satọde, Febụwarị 15, 2014 Douglas Karr
Chei… naanị chaị. Agụwo m banyere ya Usoro nhazi ọnwa ole na ole gara aga ma mesịa nwee oge ịdebanye aha maka ikpe ahụ ma nye ya nlele ule. Kpomkwem kediegwu plugin na ọtụtụ ndị ọzọ ike na m chere na.
Ikike ileba anya na blọọgụ WordPress gị na kalenda isiokwu nke posts emeela tupu mgbe ahụ, ọbụlagodi na ịdọrọ na dobe ike. CoSchedule na-ewere kalenda ederede gaa n'ọkwa ọhụụ ọhụụ. Kama ịme kalenda ahụ ka ọ bụrụ echiche, ha emeela ihe niile eji eme ihe n'ime ọdịnaya maka blọọgụ gị yana ịkekọrịta ya.
Lee ụfọdụ atụmatụ m hụrụ n'anya nke ukwuu:
Ọdịnihu Social Promotion - enwere ọtụtụ ngwa mgbakwunye nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, gụnyere ike nke Jetpack iji kwupụta ọkwa gafee ọwa mmadụ. CoSchedule na-ewe ya ole na ole notches ọ bụ ezie na ọ nwere ikike ibipụta nkwalite mmekọrịta ọha na eze n'ọdịnihu, izu ma ọ bụ ọnwa!
Ihe eji eme ihe - i nwere ike iche na m bụ onye na-eri nri, mana enwere m ihe ruru iri atọ na blọọgụ m ugbu a. Ọ bụghị na echefuru m ha, oge ụfọdụ ana m akpọtụrụ ụlọ ọrụ m na-ede maka ozi ndị ọzọ. Oge ụfọdụ echefuru na enwerem ọtụtụ draịva… mana Kalinda CoSchedule nwere akụkụ akụkụ nke na-egosi n ’ozi gị niile mgbe ị na --fefe ya. Nwere ike ịdọrọ na dobe post ahụ na kalenda mgbe ịchọrọ ibipụta ya!
Ọrụ Ọrụ - bido ederede ohuru na kalenda ma ị nwere ike ekenye ya otu n'ime ndị edemede gị, ụzọ dị egwu iji jikwaa otu gị ma hụ na ị na-enweta nrubeisi ziri ezi site n'aka mmadụ niile (ma ọ bụ isiokwu sitere n'aka onye ọ bụla) na atụmanya nke ụbọchị ebipụta!
Mmekọrịta - Enweghị nsogbu echekwa mwekota yana Bitly maka URL mkpụmkpụ, Google Analytics maka nsuso mkpọsa, Nchịkọta Omenala (ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ihe dịka Webtrends or Site Catalyst), na ọbụlagodi Kalịnda Google iji lelee posts gị na kalenda gị!
Tags: bitlyntupoomkpọsa mkpọsacoschedulekalenda googlegoogle mkpọsana-elekọta mmadụ ebipụtawordpress elekọta mmadụ ebipụta